Hello Nepal News » इकार्डीलाई ‘अर्जेन्टिनी टोलीबाट सन्यास लिन’ सुझाव !
इकार्डीलाई ‘अर्जेन्टिनी टोलीबाट सन्यास लिन’ सुझाव !
अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीमा सम्मानजनक स्थान नपाएर निराश बन्दै आएका स्टार फरवार्ड माउरो इकार्डीलाई अर्जेन्टिनी टोली छाड्न राष्ट्रिय टिमका पूर्वखेलाडी हेर्नान क्रेस्पोले सुझाव दिएका छन् । आफ्नो करिअर दौरान सन् १९९५ देखि २००७ सम्म अर्जेन्टिनी टोलीमा रहेर खेलेका उनले इकार्डीजस्ता युवा प्रतिभाले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान नपाउनु दुखद् रहेको भन्दै बरु सन्यास लिन सुझाव दिएका हुन् ।
क्रेस्पोले आफ्नो करिअर दौरान राष्ट्रिय टिमका लागि ६४ खेल खेल्दै ३५ गोल गरेका थिए । उनले क्लब फुटबलमा अर्जेन्टिनाकै रिभर प्लेट, इटालियन इन्टर मिलान, लाजियो, इंग्लिस क्लब चेल्सीलगायत क्लबबाट खेलेका थिए । क्लब फुटबलका उनले ६०८ खेल खेल्दै २७२ गोल गरेका छन् ।
क्रेस्पोले इकार्डी देशका एक स्टार खेलाडी भएको र उनी राष्ट्रिय टिमको नियमित सदस्य बन्न पूराका पूरा हक राख्ने खेलाडी भएको भन्दै उनलाई बेवास्ता गरेर उनको करिअर बर्बाद पारिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । राष्ट्रिय टिमका अन्य खेलाडी, कप्तान वा प्रशिक्षकसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो नरहेकै आधारमा एक खेलाडीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु जायज नहुने क्रेस्पोले बताएका छन् ।
‘मलाई यति थाहा छ, इकार्डी अर्जेन्टिनाका एक प्रतिभावान् खेलाडी हुन् । उनी अहिले युरोपियन लिगमा उच्च स्तरमा खेलिरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय टिममा उनलाई सम्मानजनक स्थान नदिनु दुःखलाग्दो हो,’ क्रेस्पोले भनेका छन्, ‘टोलीको नियमित हिस्सा बन्न उनले शतप्रतिशत हक राख्छन् । तर, उनीहरूले एक होनहार खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय करिअर सिध्याइरहेका छन् ।’
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका एक प्रमुख फरवार्ड इकार्डी हाल २७ वर्षको भए । तर, उनले हालसम्म राष्ट्रिय टिमका लागि जम्मा ८ खेल मात्रै खेलेका छन् । त्यसक्रममा उनले मात्र १ गोल गरेका छन् । उनीजस्ता युवा स्टारका लागि राष्ट्रिय टोलीको यो तथ्यांक निकै खराब हो । उनले सन् २०१३ मै राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका थिए । त्यसयता ८ वर्षको बीचमा उनले जम्मा ८ खेल मात्रै खेल्न पाएका छन् । उनलाई सन् २०१८ मा रसियामा भएको फिफा विश्वकपको टोलीमै राखिएको थिएन भने गत वर्ष ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिकामा पनि टोलीमै राखिएन ।
अक्सर अफिसियल र महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा इकार्डी अर्जेन्टिी टोलीमै पर्दैनन् । उनले सबैजसो खेल मैत्रीपूर्ण मात्रै खेलेका छन् । हालका कप्तान लिओनल मेस्सी टोलीमा नरहेका बेला मात्रै इकार्डीलाई राष्ट्रिय टोलीमा डाकिन्छ । मेस्सी टोलीमा हुँदा इकार्डी सधैं टोलीमै पर्दैनन् ।
फुटबल वृत्तमा विगतदेखि नै यो चर्चा छ कि, कप्तान मेस्सी र इकार्डीको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यसकै कारण मेस्सीले इकार्डीलाई टोलीमा राख्न चाहँदैनन् । व्यक्तिगत टकरावलाई लिएर मेस्सीले इकार्डीलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश नगराउन भूमिका खेल्ने गरेको आरोप मेस्सीमाथि विगतबाटै लाग्दै आएको छ । अक्सर मेस्सी टोलीमा नहुँदा इकार्डी टोलीमा पर्नु र मेस्सी हुँदा इकार्डी टोलीमै नपर्नुले मेस्सीमाथिको आरोपलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।
लिजेन्ड खेलाडी क्रेस्पो इकार्डीले हालकै स्थितिमा राष्ट्रिय टोलीको खेलाडी बनिरहनु व्यर्थ रहेको भन्दै सम्मानजक स्थान नपाउने भए सन्यास लिएर बस्नु राम्रो हुने बताए । ‘यदि म उनको स्थानमा थिएँ भने राष्ट्रिय टोली २०१८ मै छाडिसक्थें । यदि कोही खेलाडीले शारीरिक रूपमा ठीकाठक हुँदाहुँदै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा सहभागी हुन र खेल्न पाउँदैन भने त्यो धेरै नै पीडादायी हुन्छ । उनीजस्ता खेलाडीका लागि ८ वर्षमा ८ खेलको तथ्यांक सजायजस्तो हो,’ क्रेस्पोले प्रश्न गरे, ‘फुटबल खेलाडीका लागि समय र उमेरको निश्चित घेरा हुन्छ । उनले अहिले खेल्न नपाए कहिले खेल्ने ?’
क्रेस्पोले इकार्डीजस्ता खेलाडीको प्रतिभा र योगदान राष्ट्रिय टिमले ग्रहण गर्न नसक्नु देशकै लागि घाटाको कुरा रहेको बताए । ‘यहाँका समर्थकहरू पनि उनले अर्जेन्टिनाबाट खेलेको हेर्न चाहन्छन् । उनीसँग प्रतिभा र उमेर दुवै छ । उनीजस्ता खेलाडीबाट राष्ट्रिय टिमले योगदान र प्रतिभा ग्रहण गर्न नसक्नु टिमकै लागि घाटा हो । अर्को कोही खेलाडी वा प्रशिक्षकसँगको टकरावलाई लिएर कोही प्रतिभावान् खेलाडीले खेल्न पाउँदैन भने राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने संघले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’
क्रेस्पोले यदि इकार्डीले कुनै अपराध गरेको भए कारबाही गरेको घोषणा गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि उनले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको भए वा अपराध गरेको भए फुटबल संघले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर टोलीबाट सधैंका लागि हटाउनुपर्छ । तर, उनलाई खेल्न नदिनु खेलाडीको करिअरमाथि ठूलो अन्याय हो,’ क्रेस्पोले भने ।
अर्जेन्टिनाका लागि ८ वर्षको बीचमा ८ खेलेर १ गोल गरेका इकार्डीका नाममा क्लब फुटबलमा भने निकै राम्रो तथ्यांक छ । गत वर्ष इटालियन इन्टर मिलानबाट पिएसजी पुगेका उनले त्यहाँ पहिलो सिजन ३४ खेलबाट २० गोल गरे । उनले क्लब फुटबलमा हालसम्म २९० खेलबाट १५७ गोल गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति २४ आश्विन २०७७, शनिबार १४:४८